Ahoana ny fomba ahazoana mpanaraka amin'ny Instagram amin'ireto fika | Vaovao momba ny gadget
Eder Esteban | | fampiharana, Tutorials
Instagram no lasa tambajotra sosialy amin'izao fotoana izao. Tsy azo sakanana ny fitomboany manerantany, ary nanjary fampisehoana tonga lafatra ho an'ny olona maro izy io. Ity dia fomba tsara hampiroboroboana ny orinasanao, ny vokatrao, ny marika na ny fampiroboroboana ny asanao. Betsaka ny safidy ao amin'ity tambajotra sosialy ity, na dia mba hampiroboroboana ny tenanao aza, ny zava-dehibe dia ny fanananao mpanaraka amin'ny tambajotra sosialy. Ary tsy mora foana izany.
Soa ihany, misy maromaro Torohevitra sy tetika izay tena manampy rehefa mahazo mpanaraka amin'ny Instagram. Ka raha manana piraofilina ao amin'ny tambajotra sosialy ianao ary te-hahatratra mpampiasa betsaka araka izay tratra, dia azonao atao ny manaraka ireto torohevitra ireto ary manomboka mihalehibe amin'ny fanarahana azy io.
1 Fantaro ny fotoana mety indrindra hampiakarana sary
2 Fampiasana tenifototra amin'ny sary
3 Maneho hevitra ary toy ny mpanaraka hafa
4 Sivana sy kalitaon'ny sary
6 Mividy mpanaraka?
Fantaro ny fotoana mety indrindra hampiakarana sary
Instagram dia tamba-jotra sosialy izay misy tampon'isa miavaka amin'ny fotoana sasany. Ireo tampon'isa ireo dia amin'ny fotoana mitovy amin'ny firenena iray mankany amin'ny iray hafa, fa tsara ny fahalalana. Satria raha mampakatra fotoana fohy alohan'ny fisehoan'ity hetsika ity izahay dia hanana fotoana lehibe kokoa hisarihana ny sain'ny mpampiasa bebe kokoa ny sary. Ary raha misy olona mankafy ny sarinay, azontsika atao ihany koa ny hanaraka anay.
Matetika dia imbetsaka mandritra ny andro no misy hetsika bebe kokoa amin'ny tambajotra sosialy. 5:8 hariva sy XNUMX:XNUMX alina no fotoana be atao indrindra. Na dia mety misy tsy fitoviana arakaraka ny firenena onenananao aza. Soa ihany fa manana fitaovana mamela antsika hahafantatra mora foana ny ora tsara indrindra isika.
Afaka mampiasa isika Iconosquare hahalala ny ora tsara indrindra handefasana sary ao amin'ny Instagram. Amin'izany fomba izany dia hahazo ny fotoana mety isika ary afaka hiteraka fahalianana bebe kokoa, satria ny sary dia hanao izany aseho amin'ny mpampiasa maro an'isa amin'ny tambajotra sosialy. Fetsy tsotra, fa tena mandaitra.
Noho izany, tsara ny mandefa ny lahatsoratray amin'izao fotoana izao. Mety misy fotoana tsy ahafahanao mampakatra ilay lahatsoratra voalaza. Tononkalo foana izahay mampiasa fitaovana izay manampy anay handamina sary amin'ny Instagram. Noho izany dia afaka mandray ampahany lehibe amin'ny asa mialoha isika ary avy eo vao mila mampakatra an'io sary io amin'ny tambajotra sosialy. Misy ny rindranasa toa ny schedugram izay tena ilaina tokoa.
Fampiasana tenifototra amin'ny sary
Hashtags dia ampahany lehibe amin'ny Instagram. Satria ny fampiasana tenifototra sasany amin'ny sary dia afaka manampy ny sary hanana fahitana bebe kokoa eo amin'ireo mpampiasa, indrindra raha ireo tenifototra izay manana be mpanaraka. Ankoatr'izay, volana vitsivitsy lasa izay, ny tambajotra sosialy dia nampahafantatra ny mety hanarahana tenifototra. Ka izany dia manome antsika fahafaha-manao bebe kokoa, satria ny olona liana amin'ny tenifototra iray dia afaka mahita ny bokintsika.
Zava-dehibe ny fampiasana an'ireto tenifototra ireto amin'ny hafatra apetrakao amin'ny Instagram. Saingy, zava-dehibe ny tsy hanararaotantsika azy ireo, satria izany dia manome ny fahatsapana fa spam fotsiny no ataontsika. Ka manimba ny sarintsika io. Ny fampiasana tenifototra vitsivitsy nefa voafantina tsara amin'ny sary dia fomba tsara iray hahazoana fahitana sy hisarihana ireo mpanaraka ny mombamomba anao.
Na dia afaka mampiasa tenifototra toy ny #love na #photo aza isika dia tsy maintsy mampiasa ireo izay mifandraika amin'ilay sary ampakarintsika na izay tiana amidy. Mety ho orinasa na mpanakanto isika, amin'ireny tranga ireny, ampiasao ireo izay mifandraika amin'ny mombamomba anao. Ny tsy fitoviana no tena ilaina amin'io lafiny io. Amin'ny vola tokony hampiasainay, tenifototra 5 be indrindra isaky ny lahatsoratra.
Maneho hevitra ary toy ny mpanaraka hafa
Raha mila olona hanaraka antsika amin'ny Instagram isika, dia afaka mandray andraikitra ary hanaraka an'io profil na olona io. Tia na maneho hevitra amin'ny sarin'izy ireo. Ity dia fomba iray hahafantaran'ity olona ity fa misy isika, ankoatran'ny fanampiana amin'ny famoronana fifandraisana eo amin'ireto mombamomba ireto. Mampahafantatra ny tenanay izahay ary ho fantatr'izy ireo fa eo izahay ary hitsidika ny mombamomba anay amin'ny tambajotra sosialy izy ireo. Toa somary tsy misy dikany izany, saingy tsara fa fantatra fa kaonty mavitrika amin'ny tambajotra sosialy izahay.
Matetika dia vokatra fantatra amin'ny Instagram izany, rehefa manomboka manome hevitra momba ny sarin'ny mombamomba hafa ianao ary manome ny tiany, hanomboka hahita ny fomba itiavan'ny sarinao bebe kokoa ianaoAnkoatr'izay, azo inoana fa hitombo ny isan'ireo mpanaraka anao. Zavatra tena tsotra izy io, saingy ho fampiroboroboana. Hihaona amin'ny olona mety hahaliana antsika koa, na afaka manampy antsika amin'ny tetikasa sasany. Fotoana iray izay azo antoka fa tsy tianao halaina.
Sivana sy kalitaon'ny sary
Azo antoka fa zavatra efa fantatrao io, fa zava-dehibe izany ny kalitaon'ireo sary hampakarinay ao amin'ny Instagram no mety indrindra. Izahay dia tsy midika fotsiny hoe ny famahana ny sary, izay zava-dehibe ihany koa, fa sary namboarina ho matihanina. Satria raha mampiroborobo zavatra isika na te hampahafantatra ny asantsika, dia ilaina ny manolotra azy amin'ny fomba tsara indrindra. Ary amin'ity tambajotra sosialy ity dia mampiseho sary tsara izy io.
Ny sivana sary dia malaza be amin'ny Instagram. Raha mandeha mitsangatsangana amin'ny mombamomba ny tambajotra sosialy ianao dia hitanao fa maro no mampiasa ny sivana mitovy amin'izany. Ny sivana toa an'i Valencia dia malaza be ary ampiasain'ny ankamaroan'ny olona manana kaonty ao aminy. Azonao atao ny manandrana mampiasa ireo sivana ireo, satria afaka manampy amin'ny fanaovana ny sarinao ho bebe kokoa izy io. Tsara ihany koa ny mahita sivana roa izay manampy anao hanome sary tsy miova.
Ankoatra izany, afaka mampiasa fitaovana toa ny VSCO isika, izay hanampy anay hanao izay tsara indrindra hampiakarana ireo sary ampidirinay ao amin'ny Instagram. Izy io dia mpamoaka sary, izay ahafahantsika manova ny sary, ankoatran'ny fampidirana sivana ao amin'izy ireo. Mora ampiasaina izy io, ary iray amin'ireo safidy tsara indrindra eny an-tsena.
Mifandray akaiky amin'ilay teboka teo aloha ny mombamomba anay. Mila manana mombamomba izay mifanaraka amin'ny zavatra tiana ho tratrarina ao amin'ny tambajotra sosialy isika. Noho izany, tsy maintsy manana sary piraofilina isika. Ho fanampin'izany, ao amin'ilay famaritana izay voalaza ao amin'ny mombamomba azy dia zava-dehibe ny hahatonga ny lahatsoratra hahatakatra sy hanampy antsika hahatratra ny tanjontsika. Ka raha mpanakanto isika dia avelao izy hiteny eo, raha marika isika, avelao izy hivoaka. Tsara ihany koa ny mametraka tranokala na bilaogy foana mba hahitan'izy ireo atiny bebe kokoa.
Ny hevitra dia ny Instagram dia fitaovana iray hahafantaran'ny mpampiasa anao. Indrindra raha mivarotra zavatra ianao, hahafahanao mamily azy ireo mankany amin'ny tranonkalanao avy eo. Ka ilaina ny fananana mombamomba matihanina izay mazava ary manasa ny olona hanaraka anay amin'ity tambajotra sosialy ity.
Zava-dehibe koa izany andao isika ho mavitrika ary havaozina matetika ny mombamomba. Na mampakatra sary na mizara tantara. Satria ireo tantara ao amin'ny tambajotra sosialy dia nanjary iray amin'ireo asany malaza indrindra, koa aza misalasala mampiasa azy ireo, satria manampy antsika hifanerasera amin'ireo mpanaraka.
Vahaolana iray izay tadiavin'ny mombamomba maro ao amin'ny Instagram ny fividianana mpanaraka. Ity dia fomba iray haingana dia haingana hahazoana mpanaraka marobe haingana be. Ny fandoavana vola toy ny 20 na 25 euro dia afaka mahazo mpanaraka an'arivony amin'ny tambajotra sosialy. Izay azo antoka fa hampiroborobo amin'ity lafiny ity, na dia misy fatiantoka maromaro aza amin'ny tranga maro dia tsy resahina, ary zava-dehibe ny fiheverana azy.
Ny iray amin'ireo olana lehibe dia tsy manana kalitao ireo mpanaraka ireo. Amin'ny tranga maro dia profil tsy misy sary izy ireo ary tsy misy hetsika. Ka tsy manome na inona na inona ho antsika izy ireo, satria tsy ho tian'izy ireo mihitsy ny sarinay, na amin'ny fotoana inona na amin'ny fotoana inona. Izay fandaniam-bola very maina ho antsika.
Ankoatra izany, mora be ny mahita mpanaraka sandoka amin'ny kaonty Instagram. Ampy izay ny mahita fa misy kaonty izay manana mpampiasa ana hetsiny, nefa avy eo dia ambany dia ambany ny isan'ny tiany sy ny tiany. Matetika izany dia vokatry ny fividianana mpanaraka sandoka, ary koa satria tsy fantany ny fomba hifandraisany amin'ireo mpanaraka azy. Ilaina amin'ny fotoana rehetra ny fahalalana ny fomba mahaliana azy ireo, mba handraisan'izy ireo anjara sy hanarahana izay ampakarinay.
Noho izany, tsara kokoa ny tsy mampiasa ity fividianana mpanaraka amin'ny Instagram ity. Indrindra raha te hampita sary tsara isika. Satria miseho avy hatrany izany rehefa misy ny mpampiasa mividy mpanaraka, ary tsy zavatra manome endrika tsara ho an'ny olon-kafa izany. Ka ny tena izy dia tsy manome onitra antsika. Amin'ireny fikafika ireny dia ho mora kokoa amintsika ny hanana mpanaraka amin'ny tambajotra sosialy, izay mitombo hatrany ny lazany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » fampiharana » Fomba ahazoana mpanaraka ao amin'ny Instagram
Eto ianao dia afaka mahita mivantana ny fanombohana ny Huawei Mate 20 sy 20 Pro
Smart Light Strip sy Smart Outlet, vahaolana an-trano Smart avy any Koogeek